Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan Marti-qaad ah u sameeyay Salaadiinta dalka | Somaliland.Org
Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan Marti-qaad ah u sameeyay Salaadiinta dalka
December 30, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta qado sharaf u sameeyey salaadiinta Somaliland ee ku sugan caasimadda.
Kulanka madaxweynuhu kula qaatay salaadiinta qasriga madaxtooyada ayaa waxaa sidoo kale ku ku wehelinayey Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici).
Kulankaasi ayaa lagaga wada hadlay sidii marxaladda haatan dalku marayo si wada jir ah looga wada shaqayn lahaa.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) kulankaa ka sheegay in waxii tabashooyin ah ee jira wax ka qabashadooda ay xukuumaddu diyaar u tahay.
Dhankoodana salaadiinta ayaa madaxweynaha uga mahadnaqay qado sharafta uu ku maamuusay iyo sida uu diyaarka ugu yahay in si wada jir ah looga tashado danta qaranka. Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan C/Raxmaan oo kulankaasi ka dib saxaafadda uga waramayay kulankii ay madaxweynaha la yeesheen ayaa sheegay inay isku waafaqeen sidii bulshadda la iskugu soo jiidi lahaa madaama oo ay dalka ka dhacday doorasho isla markaana ay xanafo kala duwani iska jiri karaan.
Suldaan Xasan waxa uu madaxweynaha uga mahad celiyay kulanka wada tashiga ah ee uu salaadiinta dalka ugu yeedhay, waxaanu balan qaaday inay xukuumadda kala shaqaynayaan ilaalinta nabadgelyada dalka iyo danta guud.
Suldaan Axmed Daahir Muuse oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa madaxweynaha uga mahad celiyay marti-qaadka iyo kulanka uu la yeeshay madax-dhaqameedka Somaliland.
Suldaan Axmed Daahir Muuse waxa uu sheegay in Somaliland ay guulaysatay hase yeeshee aanay doorashooyinka ku guulaysan cid gaar ahi, maadaama oo uu xusay inay nabad-gelyo ku dhamaatay.
Suldaan Axmed Daahir Muuse waxa uu dadweynaha iyo axsaabta ugu baaqay inay dhawraan qaranimadda Somaliland iyo Nabad-gelyadda caalamku ku majeerto.
Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar, ayaa sheegay inay madaxweynaha ka wada hadleen sidii loo ilaalin lahaa nabad-gelyadda dalka isla markaana danaha qaranka midnimo looga gudbi lahaa marxaladda xasaasiga ah.
“Tartan ayaa la galay, tartankii lama wada soo baxaynin sadex uun baa soo baxayay. Sadex baa la sheegay inay guulaysteen. Intii kalena may guul-daraysan ee way tartameen. Waxaan leeyahay dulqaad ha la yeesho. Ninkii tartamay muu ceeboobin. Aduunkuna maalin qudha ma aha,”ayuu yidhi Suldaan Cismaan.
Waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda nabad-gelyadda Suldaan Naasir Cabdi Ismaaciil iyo Garaad C/Rashiid Garaad Ismaaciil.
Previous PostShirkadda SOM EVENTS oo shahaado-sharaf ku muteysatay Kaalintii ay ka Qaadatay Shirweynihii SONYONext PostGolaha Wakiiladda Oo Ansixiyay Miisaaniyaddii ugu Balaadhnayd ee Somaliland Yeelato	Blog